T Shirt Ho an'ny Lehilahy, T-Shirt Lehilahy, T-Shirt Vehivavy, T-shirt landihazo - Fahitana
Manana traikefa efa ho 10 taona izahay hanampiana ny mpanjifanay amin'ny filan'ny marika azy ireo.
Kolontsaina ny kalitao, ary laharam-pahamehana koa izahay. Izahay dia miziriziry hatrany amin'ny fitsipiky ny "Customer First, Quality Foremost".
Izahay dia manana ekipa manam-pahaizana momba ny famolavolana, afaka manampy anao hanao sary iray vokarin'ny fahaizanao.
ambongadiny fampiroboroboana fividianana entana mora vidy 100 ...
fomban-drazana vehivavy polyester 50% mifangaro 25% ...
Custom efijery pirinty tsotra tsy misy marika malefaka lehilahy bas ...
Nanchang Vision Garment Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny tanàna Nanchang, faritanin'i Jiangxi, Sina. Manana ny orinasan-damba sy ny fanontam-pirinty izahay, miaraka amin'ny traikefa efa ho 10 taona hanampiana ny mpanjifanay amin'ny filan'izy ireo marika manokana, manolotra peta-kofehy manokana, fanaovana sary mihetsika fanaingoana, fanontana hafanana, fanamoriana ary fanaovana pirinty lamba landy. Kolontsaina ny kalitao, ary laharam-pahamehana koa izahay. Izahay dia miziriziry foana amin'ny fitsipiky ny "Customer First, Quality Foremost".
fofonaina madio 100% polyester hamandoana wickin ...